Steel Cut Waya Shot - China Shanghai Bosun abrasive
Igwe anaghị agba nchara Cut Waya Hot
Ọla kọpa Shot / ọla kọpa Cut Waya Shot
Zinc Shot / Zinc Cut Waya Shot
Steel ịkpụ waya shot ka na usoro nke ịbịaru, ịcha na oyi wdg ọnwụ dị ka ụkpụrụ nke VDFI 8001/1994 na USA SAE2431. The ahụ nke ogbugba bụ uniformly size na nwoke ekweghị ekwe nke HV400-500, HV500-555, HV555-605, HV610-670, HV670-740 na ndị ọzọ. Na granularity a na-ekesa site na 0.2mm na 3.0mm. The shapes n'ime ha bụ ndị columnar na * Tụkwasị na haziri G1, G2, G3. E wezụga, ha bara uru anwụ ngwa ngwa na-malite si 3500cycles na 9600 cycles.
Steel Cut waya gbaa na-a na-eji maka ọgbụgba ọkụ igwe na drum ụdị, yinye ụdị, na-eweli nko ụdị, crawler ụdị, rue ụdị, n'usoro table ụdị, ìgwè ụdị, eje ije ụdị na ụgbọ ala ụdị. Ọzọkwa nwere ike ji mee ihe maka gbara n'ume equipments, pretreatment nke mmepụta akara, na ájá ọgbụgba ọkụ ụlọ.
Advantage of Steel bee waya shot
jiri ya tụnyere ígwè grit, ị nwere ike nweta 30% Mbelata na-eri. Dị ka ahụmahụ anyị, ígwè ịkpụ waya shot ga ghọọ gburugburu gbara mgbe ogologo oge use.bright anya, ọ dịghị ájá na ogologo anwụ ngwa ngwa bụ uru nke anyị ígwè ịkpụ waya ogbugba. Shanghai Bosun abrasive ụlọ ọrụ bụ ihe mbụ na emeputa nke ígwè ịkpụ waya ogbugba.
ekweghị ekwe ndiiche
Max ndiiche ± 1.0HRC ma ọ bụ ± 40HV
Min njupụta (ike-ekpebisi ike site na-aba Ndahie)
1. Shot pretreatment: mkpuchi pretreatment, n'elu nkwadebe, pretreatment
2. ebre ájá: akpọ ájá.
3. nhicha: gbara ọgbụgba ọkụ, gbara ọgbụgba ọkụ, nēfe ihicha, gbawara nhicha oge ọgbụgba, forgings, gbara ọgbụgba ọkụ, gbara ọgbụgba ọkụ ibe ya bụrụ, nēfe ájá, ígwè ihicha, nhicha nke ígwè, ígwè ihicha.
4. Shot: ígwè ọgbụgba ọkụ, ígwè shot ọgbụgba ọkụ, ígwè shot ọgbụgba ọkụ.
5. Ike: ogbugba peening, okpomọkụ omume iberibe shot peening, gbara peening gia.
6. Shot: ígwè shot, ígwè sandblasting, ụgbọ mmiri ọgbụgba ọkụ, ígwè shot, ígwè ogbugba.
7. nchara: shot ọgbụgba ọkụ, abrasive ọgbụgba ọkụ, nēfe nchara, nchara forgings, forgings descaling ígwè nchara, ígwè ajari.
Previous: Igwe anaghị agba nchara Cut Waya Hot
ọla kọpa ọgbụgba ọkụ grit
Cut Waya Shot
Cut Waya Steel shot
Ọla kọpa slag # 3